प्रधानमन्त्रीद्वारा खोप केन्द्र अनुगमन «
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सोमबारदेखि शुरु भएको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप ‘जोन्सन एण्ड जोन्सन’ अभियानको निरीक्षण एवं अनुगमन गरेका छन् ।
केन्द्रीय युनिफाइड अस्पतालमा प्रधानमन्त्री देउवालाई उपनिर्देशक डा अशेष ढुङ्गेलले खोप लगाउनका लागि आयोजना गरिएको व्यवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाले अस्पतालमा खोप लगाइरहेका बेला निरीक्षण गरेका हुन् । उनीसँगै नेपालस्थित अमेरिकाका राजदूत ¥याण्डी बेरी पनि थिए ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल, युनिफाइड अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. जागेश्वर गौतमले लगायतले अस्पतालका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।
अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा. गौतमले सोमबार एक हजार जनालाई खोप प्रदान गर्ने बताए । अमेरिकाले नेपाललाई १५ लाख ३४ हजार ८५० मात्रा जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप कोभ्याक्स सुविधाअन्तर्गत यही असार २८ गते अनुदानमा उपलब्ध गराएको हो । सो खोपको एक मात्रा लगाए पुग्छ । यसअघि नेपालमा कोभिशिल्ड र भेरोसेल खोप लगाइएको थियो ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका बालस्वास्थ्य तथा कल्याण शाखा प्रमुख डा झलक शर्मा गौतमले सोमबारदेखि काठमाडाँै उपत्यका, काभ्रे र गण्डकी प्रदेशका केही जिल्लामा उक्त खोप लगाउन थालिएको जानकारी दिए ।
जोन्सन एण्ड जोन्सन खोप ५० वर्षदेखि ५४ वर्ष उमेर समूहका, पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक, नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थी, स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र सरसफाइकर्मी, यसअघिको अभियानमा खोप लगाउन छुट भएकालाई लगाइने छ । उनले खोपलाई चाँडै नै देशभर पु¥याउने बताए ।
सरकारले नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनसहितको कोभिड–१९ महामारीको तेस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी आदेश, २०७८ जारी गरेको
केही वर्ष अघिसम्म अदक्ष श्रमिक माग गर्ने श्रम गन्तव्यले पछिल्लो समय नेपालबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम
गुटु स्वास्थ्य चौकी भवन १२ वर्षदेखि अलपत्र
भनिन्छ ‘१२ वर्षमा खोलो पनि फकिन्छ’ तर १२ वर्षअघि निर्माण थालिएको सुर्खेतको गुटु स्वास्थ्यचौकीको भवन
दाङ-थारु वस्तीमा अघिल्ला वर्षको जस्तो यस वर्ष माघी पर्वको रौनक आएन । माघीको अवसरमा हुने